ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू भाग २—ख्रीष्टलाई जान्नु र अनुभव गर्नु । निःशल्क ख्रीष्टियान पुस्तक । | रेमा साहित्य वितरकहरू
ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू—भाग दुई
समूह दुई, पहिलो पुस्तक, २८ पृष्ठहरू
वाचमेन नी र विटनेस लीले स्वस्थ ख्रीष्टियान जीवन दिगो राख्नको निम्त तीन आधारभूत तत्वहरू प्रस्तुत गर्दछन्—प्रभुसित समय बिताउनु, सरल तरीकामा उहाँलाई सम्पर्क गर्नु, र उहाँमा गहिरो रूपमा बढ्नु । यी चाबीहरूले तपाईंलाई परमेश्वरको वचनमा पोषण भेट्टाउन, कुनै पनि समय वा कुनै पनि क्षण ख्रीष्टलाई सम्पर्क गर्न, र गहिरो, मीठो र गुप्त तरीकामा परमेश्वरलाई अनुभव गर्न सहायता पुरयाउनेछन् ।
के तपाईंले बाइबलको तपाईंको पढाइ सुक्खा भेट्टाउनुहुन्छ ? परमेश्वरको वचनमार्फत आपूर्ति गरिने व्यवहारिक तरीकाहरू थाहा पाउनुहोस् ।
साँचो आराधना के हो ? पिताले खोज्नुहुने वास्तविक आराधनाभित्र प्रवेश गर्नुहोस् ।
कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रार्थना गर्ने र प्रभुमा पर्खिने भनी थाहा पाउनुहोस् ।
ख्रीष्टमा गहिरो रूपमा जरा गाडिनुभएर सतही ख्रीष्टियान जीवनबाट मुक्त हुनुहोस् ।
“ख्रीष्टियान जीवनको केन्द्रीय बुँदा ख्रीष्ट स्वयमलाई नै जान्नु हो । यसको लागि हामीले दिनदिनै जीवित तरीकामा उहाँलाई सम्पर्क गर्न र अनुभव गर्न आवश्यक हुन्छ । यो अनुभवले उचित आत्मिक खाना, नियमित आत्मिक आराधना, र गहिरो आत्मिक बढाइ लगायत, केही आधारभूत कुराहरूलाई संलग्न गर्दछ । वाचमेन नी र विटनेस लीद्वारा लेखिएका, ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग दुईमा, स्वस्थ ख्रीष्टियान जीवनको लागि तीन आधारभूत तत्वहरूलाई प्रस्तुत गरिएका छन्ः प्रभुसित समय बिताउनु, सरल तरीकामा उहाँलाई सम्पर्क गर्नु, र उहाँमा गहिरो रूपले बढ्नु । यी सन्देशहरूले खोजी गर्ने ख्रीष्टियानहरूलाई परमेश्वरको वचनमा भएको प्रचुर पोषणभित्र, ख्रीष्टसितको क्षण–क्षणको सम्पर्कभित्र, र परमेश्वरको गहिरो, गुप्त अनुभवभित्र ल्याउनेछन् ।”
प्रभुसितको समयः यो महत्वपूर्ण अध्याय एण्ड्रियू मूर्रेका आविष्कारहरूमध्ये एउटा—उनले बोलिरहेको सम्पूर्ण जमातमध्ये, एक जनाले मात्र दिनको तीस मिनेट प्रार्थना गरेको र अधिकांशले दिनको पाँच मिनेट मात्र प्रार्थना गर्दै बिताएको—घतलाग्दो कथासित शुरू हुन्छ । तैपनि, प्रभावकारी प्रार्थना हाम्रो ख्रीष्टियान जीवनमा पूर्ण रूपले जीवन्त हुन्छ ! विटनेस लीले हामीलाई प्रभुसित अर्थपूर्ण प्रार्थना कसरी गर्ने र आत्मिक पोषण प्राप्त गर्न परमेश्वरको वचन कसरी पढ्ने बारेमा सहयोगी बुँदाहरू दिँदछ ।
प्रभुलाई छुने सरल मार्गः प्रार्थनामा र वचनमा प्रभुसित व्यक्तिगत बिहानको समय हुनुको अतिरिक्त, अझै हाम्रो दिनको बाँकी समय छ । यो अध्यायले कुनै पनि क्षणमा र कुनै पनि ठाउँमा प्रभुलाई छुने, भेट्टाउने र आराधना गर्ने ज्यादै व्यवहारिक तरीका खुल्ला पार्दछ ।
गहिरोले गहिरोलाई बोलाउँछः के तपाईं प्रभुका गहिरा अनुभवहरूको निम्ति तीव्र इच्छा गर्नुहुन्छ ? तपाईं प्रभुमा बढ्नुहुँदा तपाईंले तपाईंका अनुभवहरू तपाईं स्वयमको निम्ति मात्र होइन, तर अरूहरूको निम्ति पनि हो भनी भेट्टाउनुहुनेछ । हामीले प्रभुलाई हाम्रो अस्तित्वभित्र झन् गहिरो जान दिँदा र हामी उहाँमा जरा गाडिँदा, अरूहरूले सहायता र ज्योतिर्मय गराइ प्राप्त गर्नेछन् । एक पटक हाम्रो भित्रिय अस्तित्व छुनासाथ, अरूहरूले सहायता र ज्योतिर्मय पार्ने काम प्राप्त गर्नेछन् । यो अध्यायको पढाइमार्फत यो अनुभवको वास्तविकताभित्र प्रवेश गर्न शुरू गर्नुहोस् ।
ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग एक सर्व–सम्मिलित ख्रीष्ट